Beach soccer: resin’ny Barea i Mozambika | NewsMada
Beach soccer: resin’ny Barea i Mozambika
Tsara fanombohana ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2018), taranja beach soccer. Resin’ny Malagasy tao amin’ny kianja filalaovany, tamin’ny isa tery 5 no ho 4, mantsy i Mozambika, nandritra ny lalao mandroso, notanterahina ny alahady 9 septambra lasa teo.
Niady ny lalao teo amin’ny roa tonta. Nifanenjehana sy nifanakaiky hatrany ny isa, tao anatin’ireo tapa-potoana 12 mn intelo miditra. Efa tany amin’ny tapa-potoana farany vao nivoaka ny traikefa sy ny fahaiza-manao eo amin’ireo mpilalaon’ny Barea de Madagascar, nahitana an-dry Tiana (Tsiliva), i Toky sy i Ymelda ary ry Giovanni sy i Pierralit. Ny tanjaka sy ny fahazaran-dalao no tena tombony ho an-dry zalahy, raha oharina amin’ny Mozambikanina.
Tsiahivina fa mbola handray ny lalao miverina ny Barea de Madagascar, ny asabotsy 22 septambra ho avy izao. Fihaonana, hotanterahina any Mahajanga. Hiatrika ny dingana famaranana, hotanterahina any Egypta, ny volana desambra ho avy izao, izay manana isa betsaka, aorian’ireo lalao mandroso sy miverina ireo. Hatreto aloha, efa manana tombony ny ekipam-pirenena malagasy, nandresy an-tanin’olona.